Adan Ibrahim, Author at KBC Podcasts
Author: Adan Ibrahim
February 22, 2021 Iftiin FM
IFTIIN FM: Maxa ka ogtahay Ayaxa ku habsaday Garissa, Wajir iyo Mandera?
Barnaamijkan gaarka ah ayaa waxa ku eegi doona saameeynta iyo deeganada gobolka waqoybari ee Kenya ee uu ku habsaday Ayaxa. CEC Mohamed Shale oo ah wasiirka wasaarada beeraha iyo xanaanada […]
February 2, 2021 Iftiin FM
IFTIIN FM: Ma haboon tahay in la soo celiyo garaaca ardayda skoolka?
Tan iyo markii Iskuulada dib loo furey waxaa Iskuulada kusoo badanaayey ardeyda iskuulada gubaaya iyo weliba kuwa macalamiinta dhaawacyo u geysanaayey. Barnaamijkan ayaa waxan diirada ku saareyna dooda ah in […]
January 25, 2021 Iftiin FM
IFTIIN FM: Waa maxay caado wareerka?
Barnaamijka hawenka ee toddobaadka ayaa waxan diirada ku sareyna caafimaadka haweenka qaasatan caado wareerka oo lidiga ku ah qar ka mid haweenka taasi oo loo aneyay sabab la xiriirta caafimaadka […]
January 7, 2021 Iftiin FM
IFTIIN FM: Maxay tahay sirta ka dambeysa qurxiinta haweenka.
Barnaamijka amuuraha haweenka ee toddibaadka ayaa waxaan diirada ku saareyna qurxinta haweenka ama cilaan saarka. Iddacada IFTIIN FM ayaa booqatay qar ka mid ah Saloonyada ku yalla caasimada Nairobi. Shaqooyiinka […]
December 26, 2020 Iftiin FM
IFTIIN FM: Barnaamijka Diinta iyo Musuq Maasuqa.
Barnamijka ayaa wuxuu kusabsan yahay diinta islaamka qaabka ay ugu soo horjeedo musuqa maasuqa .Diinta islaamka ayaa waxay sii buuxda ula dagaalameysa laalush-ka iyo musuqa maasuqa . Waryaheena Mohamed Elmi […]
November 26, 2020 Iftiin FM
IFTIIN FM: Wax soo saarka beeraleyda ayaan waxan ku eegeyna faaidooyinka Shiinada.
Barnaamijka toddobaad laha ah ee wax soo saarka beeraha ayaan diirada ku saareyna faaidooyinka Shiinada, Iyada oo ay aad u badatay baahida loo qaba isticmaalka malabka shiinida ayaa waxa soo […]
November 17, 2020 Iftiin FM
IFTIIN FM: Barnaamika caafimaadka wadnaha
Toddobaadka ayaa wxaan barnaamijka caaafimaadka ku egeyna caaafimaadka wadnaha iyo cudurada ku dhaca wadnaha. Iyada oo sido kale aynu ku falanqeyn doono ka hortaga iyo daaweynta cudurada wadnaha. Wariyaha idaacada […]
November 16, 2020 Iftiin FM
IFTIIN FM: Wax ka baro Dastuurka dalka Kenya.
Barnaamijka Baro Dastuurka ayaan toddobaadkan ku eegeyna wax qabadka maxkamada khaadiga ee u addeegto danaha Muslimiinta. Barnaamijka waxa marti ku haya , Garsoore, Sheikh Abdul-Aziz Maalim Mohamed.
November 14, 2020 Iftiin FM
IFTIIN FM: Hoggamiyayasha haweenka ee ismaamulka Garissa oo ka hadlay cudurka Covid-19.
Haweenka hoggamiyayasha iyo kuwa mutadawiciinta ah ee ismaamulka Garissa ayaa boogaadiyay dadaalada ay dowladda ku xakameyneso cudurka Covid-19. Haweenka ayaa dhanka kale baaq u diray dowlada deganka ismaamulka Garissa.
November 11, 2020 Iftiin FM
IFTIIN FM: Barnaamijkan waxan diirada ku saareyna waxbarashada gobolka woqoybari ee dalkani Kenya.
waxbarashada gobolka woqoybari ee dalkani Kenya ayaa waxan ku eedeyna caqabadooyinka haysta ardayda iyo macaalimiintooda iyada oo ay sii kordhayaan cabashooyinka ay soo jeedinayaan.